octobre 2019 - Lalamasaka Hatry ny Ela
Accueil - octobre 2019
par MA Daoud · Published 9 octobre 2019 · Last modified 10 avril 2020
Martinika dia nosy frantsay any amin’ny ranomasin’i Karaiba, ao amin’ireo nosy vitsivitsy ao atsimon’i Portoriko. Manana helo-dranomasina malalaka sy mahafinaritra izy io. Mangamanga maha-te hizaha aok’izany ny ranony, fatratra ihany koa ny toetrandro, ary ny zava-maniry dia mahatonga ity nosy kely ity ho toy ny paradisa. Noho ireo antony ireo dia maro amin’ny mpanakarena avy any Eoropa no tonga mandany...
par Jane Collins Daoud · Published 9 octobre 2019 · Last modified 11 juillet 2020
FIZARANA Faharoa PÔRTÔ RIKÔ … tohiny St Germain, … Cabo Rojo Fantatro fa lehibe ny fitorianteny tany Fajardo nefa nahatsapa hatrany aho fa mbola maro ihany koa ireo toerana tokony homena anjara mba handre ny Tenin’ny Tompo. Noho izany, nankany St Germain aho, tanàna iray eny am-pitan’ny Nosy . Nanao fahagagana ny Tompo satria nampitsahatra ny orana izy saika hanaparitaka...
par Lalamasaka Hatry ny Ela · Published 5 octobre 2019 · Last modified 3 décembre 2019